बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन गरियो यस्तो गोप्य साँठगाँठ (पत्रसहित)
मंसिर २२, २०७३ बुधवार १८:४९:०० प्रकाशित
काठमाडौं– झापास्थित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रियाका लागि शिक्षा मन्त्रालय तथा मेडिकल काउन्सिल बीच भएको गोप्य पत्राचार स्वास्थ्य खबरपत्रिकालाई प्राप्त भएको छ ।
डा गोविन्द केसी अनशनमा भएकै अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल काउन्सिलले गोप्य साँठगाँठ गरी सम्बन्धन दिने लगभग टुंगो लगाएका हुन् । डा केसी कात्तिक ३० गतेदेखि दशौं अनशनमा थिए । मंसीर ९ गते शिक्षा मन्त्रीस्तरिय निर्णय अनुसार बी एन्ड सी कलेजले एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पूर्वाधार पूरा गरे–नगरेको परामर्श उपलब्ध गराउन काउन्सिललाई पत्राचार गरेको थियो । काउन्सिलले सो पत्र गोप्य राखी उपाध्यक्ष डा. एई अन्सारी, सदस्य डा. मनोहर प्रधान र विज्ञका रुपमा डा. पर्थ गुरागाईंलाई रातारात कलेज अनुगमनका लागि पठाएको थियो ।
काउन्सिलको टोलीले प्रारम्भिक अनुगमन गरी सम्बन्धन दिन सकिने प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । सो प्रतिवेदनका आधारमा मंसीर १७ गते नै उक्त कलेज एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने राय शिक्षा मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । यी सबै चलखेल केसी अनशन रहेकै समयमा पूरा भएका थिए । यही चलखेलका कारण सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्न आनाकानी गरेको अहिले खुलेको छ । शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले सम्बन्धनका सवै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि मात्रै डा केसीसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेका थिए ।
सम्बन्धनका लागि काउन्सिलको यो प्रारम्भिक अनुगमनको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण आधार हो । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बी एन्ड सीलाई सम्बन्धन दिन तयार भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले प्रारम्भिक अनुगमनका लागि पत्राचार गरेको बुझिएको छ । सोही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने शर्तमा केयू उपकुलपतिमा डा. रामकण्ठ मकाजुलाई दोहोर्याउन लागिएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार मकाजुले विस्तारित कार्यक्रमका नाममा सम्बन्धन दिन सकिने आश्वासन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएका छन् । मकाजुले अघिल्लो कार्याकालमा पनि विराट र देवदह मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रम भन्दै सम्बन्धन दिएका थिए ।
डा. गोविन्द केसीले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सम्झौता विपरित सम्बन्धन नदिन सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । सरकारले डा केसीको अनशन तोडाउने क्रममा गरेका सम्झौतामा चिकित्सा शिक्षा ऐन लागू नभएसम्म नयाँ सम्बन्धन, विस्तारित कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रम थप नगर्ने उल्लेख छ ।
चर्काे जनदबाबका कारण डा केसीसँग उक्त सम्झौता गरेपनि प्रधानमन्त्री दाहाल र शिक्षामन्त्री पौडेल ऐन पारित हुनुअघि नै सम्बन्धन दिलाई छाड्ने दाउमा छन् ।